२९ लाख डलरमा बिक्री भयो विश्वकै पहिलो ट्वीट ! – hamrosandesh.com
२९ लाख डलरमा बिक्री भयो विश्वकै पहिलो ट्वीट !
ट्विटरका संस्थापक ज्याक डोर्सीको पहिलो ट्वीट २९ लाख अमेरिकी डलरमा एक मलेशियाली व्यापारीले किनेका छन्। ‘जस्ट सेटिङ अप माई ट्विटर’ लेखिएको सो ट्वीट सन् २००६ मार्च २१ मा लेखिएको थियो। सो ट्वीट डोर्सीले परोपकारी कार्यका लागि बेचेका हुन्।
मलेशियाका सिना इस्टाभीले आफूले ट्वीट किन्नुलाई ‘मोनालिसा’ चित्रकला किने जस्तो भनेका छन्। सो ट्वीट बिटक्वाइनको प्रतिस्पर्धी इथर क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् सोमवार किनिएको हो। ट्वीट किनिसकेपछि इस्टाभीले एनएफटी टोकन पाएका छन् जसले कुनै पनि डिजिटल कुरा कसको हो भन्ने विवरण राख्छ।
खरिदकर्ता एस्ताभीले भने, “यो कुनै सामान्य ट्वीट होइन । मेरो विचारमा वर्षौँपछि मानिसहरुले यस ट्वीटको मूल्य बुझ्नेछन्, जुन मोनालिसाजस्तै हुनेछ ।” डोर्सीको यो ट्वीट अनलाइनमार्फत लिलामी गरिएको थियो । लिलामीबाट प्राप्त रकमको ९५ प्रतिशत डोर्सीले पाउँछन् भने बाँकी ५ प्रतिशत यसलाई सञ्चालन गर्ने अमेरिकी कम्पनी सेन्टको प्लेटफर्म ‘भ्यालुएबल्स’ले लिनेछ ।डोर्सीले बिक्रीबाट प्राप्त रकम बिटकोइनमा परिणत गर्ने र त्यसपछि अफ्रिकाका लागि परोपकारी काममा दान गर्ने बताएका छन् । बीबीसी
दैनिक आधा घन्टा मोबाइल अफ गर्दा फाइदै फाइदा
तपाईंले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो स्मार्ट फोनलाई दैनिक आधा घन्टा बन्द गर्ने गर्नुहाेस् । मोबाइलका लागि फायल शेयर गर्ने सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी एसिलियोनका प्रमुख कार्यकारी योर्गन एडहोल्मले स्मार्ट फोन दैनिक ३० मिनेट बन्द राख्न सल्लाह दिएका हुन् । उनले स्मार्टफोन ३० मिनेट अफ गर्र्दा हुने फाइदा बुँदागत रुपमा बताएका छन् ।
स्मार्ट फोनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयु भनेको ३ सय देखि ५ सय पटकसम्मको रिचार्ज हो । ५ सय पटक रिचार्ज गरिसकेपछि ब्याट्रीको क्षमता ६० प्रतिशतसम्म घट्छ । फोन बन्दा गर्दा ब्याट्री प्रयोग हुँदैन र ब्याट्री बचत हुन्छ । मोबाइल चलाउँदा तातो हुने समस्या छ भने पनि त्यसलाई ३० मिनेट अफ गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । यद्यपी फोन धेरै तात्ने समस्या छ भने अफ गर्नु तत्कालको लागि समाधान हो ।